डा. भट्टराईलाई खुलापत्र : डा. साहेव, गौरकाण्ड नयाँ कोतपर्व होइन ? – Lokpati.com
अमेरिका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेकपा नेपाली काँग्रेस मृत्यु प्रधानमन्त्री अपराध प्रचण्ड चितवन राशिफल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सरकार केपी शर्मा ओली नेपाल प्रहरी पक्राउ
डा. भट्टराईलाई खुलापत्र : डा. साहेव, गौरकाण्ड नयाँ कोतपर्व होइन ?
डा. बाबुराम भट्टराईज्यू
नेपालका शिक्षितहरुमा प्रतिष्ठाको विषय मानिने एसएलसी परीक्षामा नेपाल प्रथम भएर मात्रै होइन, हरेक परीक्षामा सफल हुने र कहिँकतै बाबुरामको उपस्थिति छ भने अरु प्रतिस्पर्धीहरु दोस्रो हुनका लागि मात्रै परीक्षामा सहभागी हुन्छन् भन्ने जबर्जस्त छाप छोडन तपाईं सफल हुनुभएको छ।
राजनीतिमा पनि जति बेलासम्म प्रचण्ड भूमिगत थिए, त्यो समयसम्म माओवादी भन्नासाथ आम मानिसहरु मूख्य रुपमा डा. बाबुराम भट्टराईकै छायाचित्र देख्दथे। क्रान्तिका तीन जादुगरी हतियार ‘पार्टी, सेना र मोर्चा’मध्ये मोर्चाको जिम्मा तपाईंले नै सम्हाल्नु भाथ्यो क्यारे। अर्को अर्थमा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धको श्रेय प्रचण्डकै हाराहारीमा तपाईलाई पनि जान्छ। यो ऐतिहासिक बिरासतको नेता तपाईं हो नै। इतिहास न त मेटिन्छ, न त कसैले ट्वीस्ट गरेर वा भ्रम छरेर नै दिग्भ्रमित पार्न सक्छन्, किनकि हामी २१ औं शताब्दीमा छौं, त्यो लुक्दैन। ‘यु आर ग्रेट लेजेण्ड अफ नेपलिज माओइस्ट मुभमेन्ट।’
प्रिय डा. भट्टराई,
म अरु थोरै प्रसंग कोट्याँउछु, जसले यो पत्र कोर्न मलाई झक्झकायो। जति बेला २०५८ जेष्ठ १९ गते नेपालमा राजदरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यति बेला तपाईंहरुको नेतृत्वमा देशभर भीषण जनयुद्धको चलिरहेको थियो, दबदबा थियो। २०५८ जेष्ठ २४ गते कान्तिपुर पत्रिकामा तपाईंको ‘नयाँ कोत पर्वलाई मान्यता नदिऔं’ शीर्षकमा लेख छापियो। तपाईंको निर्भिक, निडर र प्रष्ट विचार सम्प्रेषित त्यस लेखले तत्कालीन संसदीय पार्टीहरुलाई तत्कालै गणतन्त्रमा जान आव्हान गरेको थियो। त्यसमा थुप्रै विचारोत्तेजक तर्कहरु थिए।
म त्यस समयको २४ वर्षे जवान त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मास्टर्स दोश्रो वर्षको विद्यार्थी थिएँ। साथै तपाइहरुको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धको सारथि मूख्य जनवर्गीय संगठन अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) को विश्वविद्यालय कमिटीको अध्यक्ष थिएँ। विद्यार्थी संगठनको एक नेता वा कार्यकर्ता र देशको बौद्धिक नेतृत्वदायी संस्थाको सदस्य हुनाले तपाईंको बौद्धिक गाइडलाइनले हामीलाई मौका दियो। सन्नाटा र शून्यतालाई चिर्दै मार्गदर्शन पाएजस्तै भयो। तपाईंको लेखलाई फोटोकपि बाँड्ने अभियान नै चलायौं। वास्तवमा आस्थाको प्रतीककै रुपमा तपाईंले मन मस्तिष्कमा डेरा जमाउनुभयो।
समय क्रममा दोश्रो वार्ताको नेतृत्व गरी तपाईं काठमाडौं आउनुभयो। तर, वार्ता सफल भएन। पुनः जनयुद्धको भीषणतासँगै थुप्रै होनाहार नेपाली जनले प्राणको आहुति दिए। युद्धले सशस्त्र द्वन्द्वको मान्यता पायो। संयुक्त राष्ट्रसंघको उपस्थितिमा तत्कालीन सत्ता र माओवादीबीच शान्ति वार्ता भयो। प्रथम संविधान सभाको चुनाव भयो। संविधान सभामा तपाईं अत्याधिक बहुमतले चुनिनुभयो। पहिलो संविधानसभाकै अवधिमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको प्रथम गणतान्त्रिक सरकारको अत्यधिक सफल पनि अर्थमन्त्री हुनुभयो। कसैले नपत्याएको आर्थिक प्रगति गर्नुभयो, त्यो पनि ९ महिनामा नै।
दिनहरु बित्दै गए। तपाईंले प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाउनुभयो। मुस्ताङ गाडीदेखि कतिपय जनमूखी पहल गरे पनि अर्थमन्त्री कालजस्तो प्रधानमन्त्री काल शुभ रहेन। अल्पमतको सरकारको सीमितताका रुपमा व्याख्या विश्लेषण गरियो। दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा तपाईंले संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्ष÷सभापतिको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनुभयो। तपाईंले संविधान निर्माणका प्राविधिक पक्ष र रस्साकस्सीमा सक्रियतापूर्वक भूमिका निभाउनुभयो। अन्ततोगत्वा नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो।
संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने ७० वर्षदेखिको नेपाली जनताको सपना साकार भयो। आम बुझाइमा शान्ति वार्ताकालभरि प्रचण्डको काँधमा काँध मिलाएर डा. बाबुरामले साथ नदिएको भए न त शान्ति प्रक्रिया सफल हुन्थ्यो, न त संविधान नै जारी हुन्थ्यो। भित्र के–के खिचडी पाक्थ्यो, त्यो त्यति जानकारीको विषय रहेन। तर, संविधान जारी सँगसँगै तपाईंका कदम अनुमान गर्नै नसक्ने गरी कुन दिशामा मोडिए, मोडिए। म अचम्मित छु। हामी अचम्मित छौं। मेरो बुझाइमा तपाईंको कदमबारे स्वयं तपाईंको जीवनसंगिनी हिसिला यमीसमेत अनविज्ञ हुनुहुन्थ्यो। कुन अदृश्य ताकतले तपाईंका कदम निर्धारण भए ? नयाँ शक्ति नामको कुराको चुरोको भेउ पाउन सकिएन।
खासमा हिसिलाजी समेत बेखबर रहनुपर्ने ताकत के हो ? २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो। त्यसमा तपाईं स्वयंको दस्तखत छ। असोज १ गते तपाईंको रुस भ्रमण गर्ने स्याडुल थियो। म लगायत मेरा मित्रहरु टेकबहादुर थापा, गोकर्ण सापकोटा, केशव सापकोटा तत्कालीन रुसका लागि नेपाली राजदुत रविमोहन सापकोटाको निमन्त्रणामा निजी भ्रमणका क्रममा रुसको राजदुतावासमा थियौं। सोही दिन हिसिला पनि दुतावास आइपुग्नुभयो। हामी सँगसँगै बस्यौं। अकस्मात तपाईंको रुसका लागि तय भएको भ्रमण रद्द भयो।
हिसिलाजीबाट तपाईं एकदम आक्रोशित भएको र ‘कतै पार्टी फोर्न पनि सक्छन् बाबुरामले’ भनी आशंका व्यक्त गरेको मात्र अवस्था थियो। अन्य कुरा र कारणहरु उहाँसमेत बेखबर हुनुहुन्थ्यो। यसबाट थाहा हुन्छ कि संविधान जारीपछिका तपाईंका कदम तत्कालीन पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरु कसैसँग पनि सल्लाह नगरी चालेको जस्ता लाग्छन्। तपाईंसँग सबैभन्दा नजिक ठानिएका टोपबहादुर रायमाझीले त्यस समयमा दिएका अभिव्यक्तिले पनि यस्तै कुराको संकेत गर्छन्।
उपर्युक्त प्रसङ्ग किन मात्र जोडेको हुँ भने तपाईंका कदमबारे मित्रजनहरु बेखबर थिए। एकल वा आवेगका उद्वोधन थिए। संविधान जारी गरेपछि किन विचलित हुन पुग्नुभयो ? कैयौं आयामबाट सोच्दा पनि भेउ पाउन सकिएन। हुन त आरोप लगाउनेहरुले तपाईलाई दक्षिण शक्तिको इशारामा चल्ने स्ट्राइकरको उपमा दिन्छन्। म पूरै गिरेर त्यस हदको आरोप लगाउने पक्षमा छैन।
सायद दक्षिण रुझान, शिक्षामा जस्तै राजनीतिमा प्रथम स्थान ग्रहण गर्न नपाएको कुण्ठा, क्षणिक आवेग, तत्कालीन समयमा अकस्मात शक्तिमा उदायका दिल्लीको आम आदमी पार्टीका नेता केजरीवालझै उदाउने मनोकाङ्क्षा आदिको कुल योग तपाईंको कदम हुनुपर्छ। यो मेरो अनुमान मात्र हो। आत्मसमीक्षा गरी हेर्नुस् त ? यस्तै चीजको योग होइन त तपाईंको कदम ?
समय अगाडि बढ्दै गयो। तामझामका साथ ज्याकेट विज्ञापनसहित तपाईंले नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणा गर्नुभयो, जसले तपाईलाई नयाँ शक्तिका लागि उचाले, सायद ती सबैले साथ दिएनन्। जस्तै पत्रकारिताबाट राम्रै नाम कमाएका रविन्द्र मिश्र। तैपनि अझै केहीले आशा गरे। यहाँसम्म आइपुग्दा आफूले २२ वर्ष लगातार सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टीका कार्यकर्ता र पार्टी संगठन सुधार्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको आरोपसहित पार्टी परित्याग गरी नयाँ पार्टी खोलेर चुनावमा होमिएका र चुनावमा जनअनुमोदित भई सत्तासिन हुन पुगेका मलेसियाका नेता महाथिर मोहम्मदलाई समेत सम्झें मैले।
तपाईंका कदमको समर्थन गर्न नसके पनि मनको कुनै कुनामा झिनो आशा थियो। क्षमतावान् आदर्श नेताप्रतिको मोह र विश्वास पनि थियो। तर, तपाईंले चुनावको ठीक अगाडि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने ऐलान गर्नुभयो। केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, रामबहादुर थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, बामदेव गौतमसहित तपाईं स्वयं उपस्थित भई हातेमालो गर्दै एकताको प्रतीक हातेसाङ्लोको फोटा मिडियाहरुमा भाइरल भए। तर, भोलिपल्टै तपाईं ‘यु–टर्न’ हुनुभयो। सायद सिट संख्यामा बार्गेनिङ मिलेन र तपाईं पछाडि हट्नुभयो। यसपटक तपाईंको नयाँ शक्ति निर्माणका पहलमा लगाएको सैद्धान्तिक लेपन नराम्ररी पखालियो। र, तपाईंमाथि अन्तरकुन्तर बँचेको आम विश्वास निमोठियो। शंकाको लाभबाट पनि तपाईं उम्कनुभयो। तपाईं क्रमशः तैरदैं र उत्रदै जानुभयो, होइन र ?
हाल तपाईं समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईंको नेता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित नेकपाको सरकारमा सामेल छन्। हिजो तपाईंले अरुमाथि लगाउने गरेको एउटा आरोप छ, ‘न पोथी न भाले।’ आज यो उखान तपाईंप्रति नै लक्षितजस्तो लाग्छ। किनकि तपाईं सरकारको कटु आलोचक अनि तपाईंको नेता त्यही सरकारको क्याबिनेटमा। यो कस्तो अचम्म ? अनि फोरमसँग एकता तपाईंको कुन गन्तव्यको यात्रा हो ? एकान्तमा बसेर ऐना त हेर्नुहुन्छ ?
अब म यस पत्रको चुरोतिर लाग्दछु,
संघीय संसदका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको प्रयास उद्योगको आरोपमा हिरासतमा छन्। १२ वर्ष पहिला २२ जना मानिसलाई जिउँदै इट्टाभट्टामा जलाएको आरोपमा पूर्वमन्त्री एवं बहालवाला सांसद मोहम्मद अफताव आलम प्रहरी हिरासतमा छन्। तपाईंलाई अवश्य थाहा होला, रौतहटमा २८ जना माओवादी कार्यकर्तालाई आततायी ढंगबाट हत्या गर्ने (बलात्कार गरी हत्या गर्ने, मन्दिरमा पशुझैं घुमाएर मानव बलि दिएको शैलीमा हत्या) गौर हत्याकाण्डको नाइके तपाईंको पार्टीका अध्यक्ष हुन्। उनकै निर्देशन र नेतृत्वमा त्यो घटना घटेको थियो। के उनलाई कानूनी कारवाही गर्न ढिला भएन ? यस सन्दर्भमा तपाईंको विचार के हो ?
ढिला नै सही न्यायका लागि आवाज बुलन्द गर्नु न्यायप्रेमी नागरिकको कर्तव्य हो। हजुर त आम नागरिक मात्रै नभई देशको नेतृत्व गरिसकेको पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यसतर्फ यहाँको धारणाको प्रत्युत्तरको प्रतीक्षामा छु। जसरी दरवार हत्याकाण्डपछि यहाँको साहसिक, वस्तुवादी र विचारोत्तेजक भनाइ सार्वजनिक भयो र आम धारणा निर्माणमा सहयोग पनि पुग्यो। ठीक त्यही तवरले गौर हत्याकाण्डका दोषीहरुलाई कार्वाही गर्ने कुरामा पनि यहाँको विचारोत्तेजक भनाइको अपेक्षा गर्दछु। कुण्ठा, द्वेष, आग्रह वा पूर्वाग्रहलाई थाँती राखेर ठण्डा दिमागले सोचेर प्रत्युत्तर पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु।
३–४ महिना पहिला त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पिएचडीका विद्यार्थीहरूलाई तपाईंले पढाउनुभएको एउटा कक्षामा सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ। मलाई थुप्रै कुराहरु सोध्नु थियो। तपाईंको समय अभावले सोध्ने अनुकूलता मिलेन। कम्तिमा यी ३ प्रश्नको उत्तर दिनुभए साह्रै आभारी हुने थिएँ।
पहिलो, आफ्नै गर्भबाट जन्मेको संविधान सभाको ९२ प्रतशित जनमतबाट घोषित र आफूले नै हस्ताक्षर गरेको नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि त्यस संविधानप्रति यहाँले विमति राख्नुको खास कारण के हो ?
दोस्रो, नेकपा एमाले र नेकपा एमाओवादी सँगसँगै एकता प्रक्रियामा सहभागी हुने सार्वजनिक घोषणा गरेर पुनः अलग्गै बस्ने निर्णय तत्कालै गर्ने यहाँको शक्ति, ज्ञानचक्षु र भावावेशको स्रोत के हो ?
तेस्रो, नेपालको राजनीतिक विरासत र इतिहासमा कमजोरीका बावजुद राजनीतिक परिवर्तनको मुल नेतृत्वकर्ता नेकपा र नेपाली कांग्रेसभन्दा नजिक उपेन्द्र यादव कसरी हुन पुगे ? कुन त्यस्तो चुम्बकीय तत्व छ, जसले आफ्नै २८ कार्यकर्ताको षडयन्त्रमूलक आततायी हत्याको नेतृत्व गर्यो, उसैलाई नेता शिरोधार्य गर्दै उनको शरणमा पुग्न तपाईंलाई बाध्य तुल्यायो ?
उहीँ तपाईंको भलो चिताउने, विनोदखण्ड तिमिल्सेना, भरतपुर–९, चितवन।
गैरकिसानलाई अनुदान, कर्मचारीलाई कमिसन
इंग्लिस प्रिमियर लिग तेस्रो स्थानमा उक्लियो चेल्सी